Tun Tun's Photo Diary: Portrait Photography #7
ဒီပုံတွေကို 2012 နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်က ရိုက်ထားတာပါ။ ရိုက်ထားတာ ကြာတော့ မော်ဒယ် ရဲ. နာမည်တောင် မမှတ်မိတော့ ဘူး။ အင်္ဂလန်က ဆိုတာတော့မှတ်မိတယ်။ နေရာက Sentosa က Tanjong Beach မှာပါ။ မနက် ၉နာရီခွဲလောက်က စရိုက်ပါတယ်။ အဖွဲ.လိုက် စုပြီး ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး ရိုက်လို.မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တက်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Orignal ပုံတွေကို စိတ်တိုင်းမကျလို. မတင်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အခု ရက်ပိုင်းမှ အချိန်ရတာနဲ. Edit လုပ်ပြီး တင်လိုက်တာပါ။ ဓါတ်ပုံပညာနဲ. ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
These photos were taken back in early 2012 at Tanjong Beach, Sentosa. I cannot remember the model name but I still remember that she is from England. This wasagroup shoot, so I couldn't take the way I would like to as everyone were rushing for their best shots. The reason I never upload these photos is that the original photos are not very good. These are the photos that I would like to share after editing.
at 8/14/2014 06:59:00 AM